Myanmar Plaza Christmas Wonderland 2017 | Yangon
Date Time Fri Dec 01 2017 at 11:00 am to Wed Jan 03 2018 at 09:00 pm
Venue Myanmar Plaza, myanmar plazar, Yangon, Myanmar
Created by Myanmar Plaza Follow Contact	Promote this event
?❄️☃️???Merry Christmas to You All !
သူငယ်ချင်းတို့ရေ မြန်မာပလာဇာမှာ ပြုလုပ်မယ့် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပထမဆုံးအကြိမ် Augmented Reality (AR) အေအာ နည်းပညာနဲ့ အလှဆင်ထားမယ့် ခရစ္စမတ်နဲ့ နှစ်သစ်ကူး ပွဲတော်ကိုအတူတူဆင်နွှဲဖို့ ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။
ခရစ္စမတ်ဈေးရောင်းပွဲ၊ခရစ္စမတ် သံစုံတေးသံသာတွေ၊ပျော်ရွှင်စရာဂိမ်းအစီအစဉ်တွေဖြစ်တဲ့ Escape Room နှင့် Mo Mo Play ပျော့ပျော့အိအိကလေးကစားကွင်းတွေပါတဲ့အပြင် ၂၀၁၈ နှစ်သစ်ကိုလည်း နှင်းကျတဲ့ဂီတညလေးနှင့်ဖြတ်သန်းဖို့စီစဉ်ပေးထားပါတယ်။ ဒီဇင်ဘာလအတွင်း ကျပ် (၂၀၀၀၀) ဖိုး ဝယ်ယူအားပေးသူတိုင်းအတွက် လက်ဆောင်ပစ္စည်း ကံစမ်းမဲတွေလည်း အများကြီး ဖောက်သွားပေးသွားဦးမှာပါ။
ဒါ့အပြင် ချစ်သုဝေ၊ ဖြူဖြူကျော်သိန်းနဲ့ နေမင်းအိမ် တို့ရဲ့ လိုက်ဖ်ဖျော်ဖြေတင်ဆက်မှုအစီအစဉ်တွေလည်း ရှိသေးတာမို့ အားလုံး လာရောက်ကြည့်ရှုကြဖို့ ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်နော်။ အသေးစိတ်ကို www.myanmarplaza.com.mm တွင်ဝင်ရောက်လေ့လာပါ…
Myanmar Plaza brings you the very first Augmented Reality Christmas in Myanmar.
There will be Christmas Market, Fun games activities with Escape Room, Bouncing Castles & Snow Domes for kids and New Year’s Eve Countdown Party. Bring your family and friends to enjoy Christmas Carols and Live Performances with Chit Thu Wai, Phyu Phyu Kyaw Thein and Nay Min Eain! Oh, if you spend (20,000) kyats, you can getachance to win amazing prizes with our lucky draws, too. Stay tune! And don’t forget to tell your friends about this exciting festival.
Visit www.myanmarplaza.com.mm for more information.
Also check out other Entertainment Events in Yangon, Festivals in Yangon.
Map Myanmar Plaza, myanmar plazar, Yangon, Myanmar
Hindu Dance Group (Ygn)
Fitness Fusion Club - Outdoor <Lifetime GYM>
Yangon Life Drawing - Sanchaung Sessions #14
Valentine Day Drink & Draw
3rd Myanmar Housing & Building
Leadership in Numbers: Myanmar inaGlobal Context
အ.ထ.က (၁) ဒဂုံ (၂၁)ကြိမ်မြောက် အာစရိယပူဇော်ပွဲ